Iva Neudyire Pamusoro Pekusazvipira Networking | Martech Zone
Vhiki rino ndakaita hurukuro dzakaomarara nemamwe mabhizinesi andine hanya nawo zvakanyanya. Vanoziva kuti ndine hanya nekuti ndakavatorera basa uye ndiri kuvabata kuti vazvidavirire. Netiweki yangu ndeyekudyara kwangu uye kwandinowana kudzoka kuzhinji mukudyara.
Makambani etekinoroji andinoshanda nawo anogara achiwana nzeve kubva kwandiri. Ini nguva dzose taura matambudziko, mazano uye kudos kumapoka avo. Kune munhu wese anonyunyuta, kune mazana evamwe vanongokusiya vowana mumwe mutengesi. Zvakakosha kuti, kana iwe uine hanya nezve vako vanopa mhinduro, une hurukuro dzakaoma navo pane izvo zvakakanganisika kana kuti nei.
Kune akati wandei maturusi maturusi nenharaunda dzandiri. Networking inonakidza uye inonetesa. Sebhizinesi diki, network yangu ndiyo kiyi yekubudirira kwangu. Iye wandinozvikomberedza anoratidza pane rangu bhizinesi uye zvakare anounza bhizinesi. Mamwe emambure angu anozvipira - nguva dzose vachiita zvese zvavanogona kusundira bhizinesi mumakumbo angu. Ini ndinonzwa kunge ndine chikwereti uye ndinogara ndichitora mikana yekudzosera nyasha. Vamwe vane udyire, zvakadaro, uye chete kuyera hukama hwedu nezvandakavapa.
Zvemagariro enhau zvinokanda mambure akakura. Ndiri kugara ndichiongorora kwandinofanira kutaura zvinotevera, kuti inofanira kubhadhara kana kuti kwete, kana kuti ndinofanira kutora nguva nemari kubva muchirongwa changu kuti ndivepo. Ini ndinoongorora mapuratifomu ekunyora uye kukurudzira pa. Ini ndinofunga nezve blogging maringe nevhidhiyo maringe podcasting. Ini ndinofunga nezvekutaura pane mamwe masaiti uye kubatana nevatungamiriri veindasitiri. Ibasa rakawanda.
Semubatsiri, ndine shoma shoma 'inodzokororwa', saka ruzhinji rwemari yangu rwunowanikwa nekutengesa nguva yangu. Izvi zvinoreva kuti mukombe wese wekofi, kufona kana email yandiri kupindura kune njodzi dzekurasikirwa nemari.
Kuda kuziva: Tingave nekubudirira zvakadii dai taifanira kubhadhara mumwe nemumwe musangano wega wega watinosangana nawo. Kana ndikakudanai kuti muve nekofi, ko dai ndaifanira kubhadhara mwero weawa imwe chete. Ndingadai ndichiri kukufonerai kofi here?
Izvo zvakakosha kuti iwe uongorore network yako nguva dzese kuti uone kuti urikupi kuisa mari uye kuti kana ichizobhadhara kana kwete. Bhizinesi ibhizinesi, hongu. Iva neudyire nezvekutsvaga isina kuzvibatira network. Ndingadai ndisiri kubudirira dai pakanga pasina kiyi yangu vatengi - Kuwedzera, ChaCha, Webtrends uye Ruzivo rwe Walker vari pane izvo zvinyorwa. Na "kiyi", ndinoreva mari;).
Pandinofunga nezvehukama ihwohwo uye nemashandurirwo avakaita, iwo ese akasanduka kubva pahukama hwangu nemumwe muzvinabhizimusi mumwe - Chris Baggott. Vaya venyu vanoziva ini naChris vanoziva kuti tinoremekedzana zvikuru - uye isu tese takavimbika kune mumwe nemumwe. Chris ndiye muevhangeri anodya - anogara achimanikidza kuti makambani ake atariswe… izvo zvingaite kunge zvine udyire. Sezvo ini ndichitarisa kubudirira kwangu uye yangu runyorwa rwevatengi, zvakadaro, ivo vese vakashanduka kuburikidza nehukama hwangu naChris pamusoro pemakore.
Unowana kupi vatengi kubva? Urikugadzira kupi zvako zvinotungamira zvebhizinesi rako kubva? Ndiani waunokweretesa kubudirira kwako? Uri kudzorera nyasha here? Iwe unogona kushamisika kana iwe uchizviona.
Imwe yekupedzisira noti: Iyi posvo haina kuitirwa kudzikisira chero evamwe vanhu akakosha zvakanyanya kubhizinesi rangu 'kubudirira uye kukura. Unoziva zvauri! Ini ndinongoreva kuburitsa mwenje kuti vamwe vedu havanyatso kuongorora uye nekukoshesa vanhu vari kunetiweki kune bhizinesi chairo ravanopa. Ini ndinofunga ndatora hukama hwangu naChris sehusina basa uye handina kuziva kukosha kwake kwandiri.